सुपर नगद बस्टर |
तपाईं जो जुन kinase देखि नगद बस्टर को ठूलो प्रशंसक छैनन् भने पनि, तपाईंले तिनीहरूलाई यो नयाँ खेल रूपमा चाहनुहुन्छ हुनेछ सुपर नगद बस्टर नगद बस्टर भन्दा ठूलो र राम्रो पुरस्कार प्रदान गर्दछ. यो निःशुल्क spins कुनै जम्मा आवश्यक खेल तपाईं थप रोचक पुरस्कार र आनन्द को भार ल्याउँछ.
जो जुन kinase अनलाइन को एक अग्रणी र आपूर्तिकर्ता छ, प्रमुख लटरी र जुवा खेल्ने संचालक लागि तत्काल जीत खेल. कम्पनी गहिरो आकर्षक र चाखलाग्दा खेल र यस बनाउँछ निःशुल्क spins कुनै जम्मा आवश्यक खेल तिनीहरूलाई मध्ये एक छ.
यो निःशुल्क spins कुनै जम्मा आवश्यक खेल सामान्य रील र spins सट्टा पासा एक रोल प्रयोग खेलिन्छ. तपाईं ब्लक मुंहतोड सुरु गर्नु अघि, तपाईं आफ्नो शर्त सेट गर्न आवश्यक. मा क्लिक गरेर आवश्यक रकम आफ्नो शर्त सेट (+) र (-) बटन. तपाईंले शर्त सेट छन्, Play मा क्लिक सुरु गर्न. तपाईं प्राप्त हुनेछ 8 एक रंग पासा को रोल, बस एक रंग प्रकट गर्न यो पासाघुमाउनुहोस्. एउटै रंग को कुनै पनि adjoining ब्लक संग नै रंग को ब्लक खेल क्षेत्रमा smashed गरिनेछ. पुरस्कार तालिका फरक रंग लागि स्लट को पङ्तिहरू. खेल क्षेत्रमा smashed ब्लक संख्या कि रंग को धेरै स्लट पुरस्कार तालिका भरिएको कसरी निर्णय गर्नेछ. त्यसैले, जस्तै, तपाईं smashed यदि4खेल क्षेत्रमा रातो ब्लक को,4रातो पङ्क्ति को स्लट पुरस्कार तालिका भरिएको हुनेछ. तपाईं ब्लक मुंहतोड बारेमा जाने रूपमा पनि अतिरिक्त सुविधा र तत्काल पुरस्कार भेला मौका प्राप्त.
यस अतिरिक्त सुविधाहरू निःशुल्क spins कुनै जम्मा आवश्यक खेल हो:
जब तपाईं यो प्रदर्शित छ जो अतिरिक्त रोल एक ब्लक तोड, तपाईं पासा अतिरिक्त रोल प्राप्त.
जब तपाईं यो प्रदर्शित एक पुरस्कार राशि छ जो एक ब्लक तोड, तपाईं पुरस्कार राशि प्राप्त.
जब तपाईं यो प्रदर्शित मिनी खेल छ जो एक ब्लक तोड, तपाईं एक मिनी-खेल खेल्न प्राप्त.
जब तपाईं पुरस्कार तालिका मा एक रंग को सम्पूर्ण पङ्क्ति भर्न, तपाईं पङ्क्ति लागि प्रदर्शित पुरस्कार प्राप्त.
यो पहिले नै प्ले गर्ने नगद बस्टर ती लागि ठूलो छ, तर यो शुरुआती द्वारा उत्तिकै आनन्द हुनेछ. यो नि: शुल्क लागि RTP कुनै जम्मा आवश्यक खेलको बारेमा छ spins 88.25%.